Dharka Buuxinta 3 In 1 Warshada Mashiinka Buuxinta |Buuxinta Buuxinta Shiinaha ee Buuxinta 3 In 1 Soo-saareyaasha Mashiinnada Buuxinta, alaab-qeybiyeyaasha
Khamriga Dhalada ah ee Tooska ah iyo Mishiinka Buuxinta Suugo Soy
Kani waa mashiinka buuxinta suugo soy ah oo otomaatig ah, kor u qaad fulinta bamka bistooska mugga leh ee saxda ah ee buuxinta nuxurka, iyo nolosha adeeg dheer, heerkul sare u adkaysta, aashitada iyo alkali adkaysta, mashiinka dhejiska, korantada, is dhexgalka gaaska, ku habboon suugo basbaas, maraqa basbaaska leh, maraqa hilibka lo'da, maraqa boqoshaada, maraqa badda, maraqa toonta iwm., Agabka viscosity ee kala duwan oo leh buuxinta dhalada-dhaqidda, foornada jeermis-dilka tunnel, mashiinnada wax lagu duubo, mashiinnada calaamadaynta iwm qalabka wax soo saarka, oo u hoggaansamaya shuruudaha GMP.
1) Mashiinka waxaa inta badan loo isticmaalaa khamriga iyo hawlgalka buuxinta suugada;
2) Mashiinkaani wuxuu isku daraa biyo raacida iyo buuxinta iyo daboolka;
3) Nidaamka oo dhan waa mid toos ah, oo ku habboon dhalada dhalada iyo aluminium koofiyadaha birta ah ee buuxinta vodka, khamriga, suugada iyo iwm;
4) Mashiinku wuxuu ku habboon yahay inuu hagaajiyo mashiinka si uu u buuxiyo noocyada kala duwan ee dhalooyinka;
5) Hawlgalka buuxintu waa dhakhso badan yahay oo xasilloon sababtoo ah cadaadiska taban ee buuxinta hawlgalka ayaa la qaatay, taasina waa sababta mashiinku u leeyahay awood iyo faa'iido badan marka la barbardhigo mashiinka kale ee thd isla qeexitaanka;
6) Qalabka OMRON ee horumarsan ee tontroller (PLC) waxa loo qaatay in lagu xakameeyo mishiinka si toos ah u shaqaynaya, iyo gudbiyaha gelinta dhalada waxa uu qaataa transducer leh xawli la hagaajin karo, iyo wax-soo-saarka dhalada waxa uu qaadanayaa xawaare lagu hagaajin karo;
7) La shaqaynta beddelka mishiinka weyn waxa ay dhalada ka dhigaysa mid si joogto ah oo la isku halleyn karo u socoto;
8) Way ku habboon tahay in lagu shaqeeyo otomaatig sare sababtoo ah qayb kasta oo ka mid ah mishiinka ayaa la kormeeraa si ay ugu shaqeyso qalabka korontada ku shaqeeya;
9) Mashiinku waa qalab la doorbido fikradda loogu talagalay samaynta cabitaannada.
Dhadhanka Tooska ah ee Biyaha Cuntada Soy Sauce Buuxinta Mashiinka Cafiska
Mashiinka Buuxinta ayaa ah habka dhalada ee ugu dabacsan suuqa, gaar ahaan loo farsameeyay si loogu oggolaado hal nidaam inuu wax ka qabto ku dhawaad ​​dhammaan dhererka dhalada, dhexroorka jidhka iyo Koofida.Beddel qaybaha xiriirinta inta u dhaxaysa cabbirrada dhalada ee kala duwan, kaliya u baahan wax ka yar 30 daqiiqo.
Si toos ah 2 in 1 Dhalo Khamriga/Mashiinka Buuxinta Suugo Soy
1) Soodhahan taxanaha ah ee weelka dhalada dhalada ah iyo buuxinta waxa ku jira qayb dhalada lagu dhaqo iyo qayb buuxinta, si toos ah oo toos ah oo leh kontoroolka PLC.
2) Qaybaha la xiriira walxaha waxaa laga sameeyaa bir aan fiicnayn 304 iyo walxo gaar ah oo u adkaysta daxalka.
3) Iyo buuxinta gaarka ah ee afka waxay hubisaa in aan diif ahayn.Waxay leedahay faa'iidooyin sida, automation sare, waxqabadka lagu kalsoonaan karo, xawaaraha wax soo saarka degdega ah, saxnaanta buuxinta saxda ah, hawlgalka fudud, la qabsiga wanaagsan iyo wixii la mid ah.Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada iyo cabitaannada aan gaaska ahayn (sida biyaha, casiirka, cabitaannada shaaha, suugo soy ah, khamri, khal).
4) Ku haboon dhalada dhalada laga bilaabo 200ml ilaa 800ml
5) Dhalada maran ayaa lagu dahaadhaa weelka,kadibna waxa la dhex maraa qaybta maydhista iyo buuxinta,waxa ay ka baxdaa qaadiyaha.
800-20000 Bph Toomaatig ah Soy Sauce Rotary Buuxinta
1. Mashiinkaani wuxuu qaataa tignoolajiyada koontaroolka tooska ah ee HMI ee horumarsan iyonidaamka habaynta xawaaraha beddelka inta jeer.
2.Naqshadaynta habka joojinta qoor-gooyaha waa la qaatay, iyo qaadista dhalada waa la qaatay, taas oowaxay dabooli kartaa baahida tignoolajiyada waraabka kulul ee ka hooseeya 95 digrii.
3. Lagu qalabeeyay nidaamka wareegga heerkulka joogtada ah, xakamaynta heerkulka tooska ah,reflux toos ah.
4. Iyo qaybaha aasaasiga ah ee walxaha laga sameeyay SUS304 qalabka birta ah, qaybaha korantada iyo qaybaha pneumatic waxay ka samaysan yihiin warshado caan ah oo caalami ah.
Mashiinada Buuxinta Suugo Soy Xawaaraha Sarreya ee Dhalooyinka Xayawaanka ah
1. Mashiinkan inta badan waxaa loo isticmaalaa khamriga iyo buuxinta suugada.Mashiinkan waxaa lagu daraa biyo raacid, buuxinta daboolka;Nidaamka oo dhan si toos ah ayuu u buuxaa, wuxuuna ku habboon yahay dhalada dhalada iyo koofiyadaha birta aluminiumka ah ee buuxinta vodka, khamriga, suugo iyo iwm.
2. Nooca dhalada ah ee lagu dabaqi karo waxaa lagu hagaajin karaa si xor ah oo ku habboon oo si fudud u shaqeynaya.
3. Nooca buuxinta waxaa la qaataa nooc cusub oo buuxinaya cadaadis diidmo ah, samaynta buuxinta si dhakhso ah oo joogto ah.Taasi waa sababta mashiinku u leeyahay karti iyo faa'iido badan marka la barbardhigo mishiinka kale ee la midka ah.
4. Mashiinkan waxaa la qaatay kontaroolaha barnaamijyada horumarsan ee PLC, wuxuuna ka dhigayaa mashiinku inuu si toos ah u shaqeeyo, gudbiyaha gelinta dhalada wuxuu qaataa transducer leh xawaare la hagaajin karo, iyo soo-qaadiyaha wax-soo-saarka dhaladu wuxuu qaadanayaa xawaare lagu hagaajin karo.La shaqaynta beddelka mishiinka wayn waxa ay dhalada ka dhigtaa mid si habsami leh oo la isku halayn karo u shaqaynayo.
5. Way ku habboon tahay in lagu shaqeeyo otomaatig sare sababtoo ah qayb kasta oo ka mid ah mishiinka ayaa la kormeeraa si ay ugu shaqeyso qalabka korontada ku shaqeeya.Mashiinku waa qalab fikradeed la door biday kuwa cabitaanka sameeya.
Mashiinka Cafiska Buuxinta Suugo Soy Toos ah
2. Nooca dhalada ah ee lagu dabaqi karo waxaa lagu hagaajin karaa si xor ah oo ku habboon oo si fudud u shaqeynaya.3. Nooca buuxinta waxaa la qaataa nooc cusub oo buuxinaya cadaadis diidmo ah, samaynta buuxinta si dhakhso ah oo joogto ah.Taasi waa sababta mashiinku u leeyahay karti iyo faa'iido badan marka la barbardhigo mishiinka kale ee la midka ah.
Khadka Soo saarista Cabbitaannada Mashiinka Buuxinta Suugo Soy-ga Maalinlaha ah
2. Nooca dhalada ah ee lagu dabaqi karo waxaa lagu hagaajin karaa si xor ah oo ku habboon oo si fudud u shaqeynaya.3. Nooca buuxinta waxaa la qaataa nooc cusub oo buuxinaya cadaadis diidmo ah, samaynta buuxinta si dhakhso ah oo joogto ah.Taasi waa sababta mashiinku u leeyahay karti iyo faa'iido badan marka la barbardhigo mishiinka kale ee la midka ah.4.Mashiinkan waxaa la qaatay kontaroolaha barnaamijyada horumarsan ee PLC, wuxuuna ka dhigayaa mashiinku inuu si toos ah u shaqeeyo, gudbiyaha gelinta dhalada wuxuu qabtaa transducer leh xawaare la hagaajin karo, qaadaha wax soo saarka dhalada wuxuu qabtaa xawaaraha la hagaajin karo.La shaqaynta beddelka mishiinka wayn waxa ay dhalada ka dhigtaa mid si habsami leh oo la isku halayn karo u shaqaynayo.
Si toos ah 2 gudaha 1 Mashiinka Buuxinta Suugo Soy
2. Nooca dhalada ah ee lagu dabaqi karo waxaa lagu hagaajin karaa si xor ah oo ku habboon oo si fudud u shaqeynaya.3. Nooca buuxinta waxaa la qaataa nooc cusub oo buuxinaya cadaadis diidmo ah, samaynta buuxinta si dhakhso ah oo joogto ah.Taasi waa sababta mashiinku u leeyahay karti iyo faa'iido badan marka la barbardhigo mishiinka kale ee la midka ah.4.Mashiinkan waxaa la qaatay kontaroolaha barnaamijyada horumarsan ee PLC, wuxuuna ka dhigayaa mashiinku inuu si toos ah u shaqeeyo, gudbiyaha gelinta dhalada wuxuu qabtaa transducer leh xawaare la hagaajin karo, qaadaha wax soo saarka dhalada wuxuu qabtaa xawaaraha la hagaajin karo.La shaqaynta qalabka wax ku beddela ee mishiinka weyn waxa ay dhalada ka dhigtaa mid si habsami leh oo la isku halleyn karo u socdo.5.Way ku habboon tahay in lagu shaqeeyo otomaatig sare sababtoo ah qayb kasta oo mashiinka ah ayaa la kormeeraa si ay ugu shaqeyso qalabka korontada ku shaqeeya.Mashiinku waa qalab fikradeed la door biday kuwa cabitaanka sameeya.
Beerka Aluminiumka ah ee Aluminiumka ah ee Aluminiumka ah ee Buuxinta Mashiinka wax lagu duubo
Mashiinku waa qalab buuxin iyo dabool heersare ah, waxaa loogu talagalay in lagu nuugo tignoolajiyada horumarsan ee gudaha iyo dibadda.Waxaa inta badan loo isticmaalaa buuxinta iyo daboolidda cabitaannada kaarboonaysan sida cabitaannada fudud, koolada, khamriga dhalaalaya, iwm.
faa'iidooyinka sida dhismaha horumarsan, shaqo xasilloon, hawlgal ku habboon, iyo dayactirka & dayactirka, kontoroolka transducer iyo sidoo kale waxtarka wax soo saarka sare.Waa qalabka ugu habboon ee warshadda cabitaanka dhexdhexaadka ah & cabbirka yar.
Fiidiyowgani waa mashiinka buuxinta iyo buuxinta qasacadaha tooska ah
Daasadda Cabitaanada Jilicsan ee Kaarboon-ka-caabsan waxay kartaa Makiinada daboolka buuxinta cabitaanka
Atomatic tin Can biir Qalabka Buuxinta Mashiinka Daabacaadda
Daasacad pop-gasheedka biirka soodhaha ee tooska ah ayaa daboolaya mashiinka buuxinta
mashiinka buuxinta saliidda cuntada mashiinka buuxinta malab Mashiinka Buuxinta Saliida Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon